Xubnaha KDQ ee ku sugan G/Awdal oo soo kormeeray Goobaha ay ka socoto Kaadh Qaybintu. | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 May 3 News Xubnaha KDQ ee ku sugan G/Awdal oo soo kormeeray Goobaha ay ka socoto Kaadh Qaybintu.
Xubnaha KDQ ee ku sugan G/Awdal oo soo kormeeray Goobaha ay ka socoto Kaadh Qaybintu.
Xubnaha kDQ ee ku sugan Gobolka Awdal ayaa maanta kormeer ay ugu kuurgalayaan hawlaha kaadhqaadashada ee ka socda Gobalka Awdal ku soo maray goobo badan oo ay ka socoto kaadh qaadashadu.
Xubnahan KDQ Guddoomiye ku xigaynka KDQ mudane Maxamuud Wacays iyo komishaneer Cabdifataax Ibraahim oo kormeerkoodaas ku soo indha indheenayay sida ay u socoto hawsha kaadh qaybinta iyo sida ay hawsha u wadaan shaqaalihii loo igmaday in ay fuliyaan hawshaas kaadh qaybinta.
Dhammaan goobaha ay soo kormeereen xubnahan KDQ waxa ay aad ugu hambalyeeyeen habsami u socodka hawsha kaadh qaybinta, sidoo kale wareysiyo xubnahani KDQ ku la yeesheen bulshadii safafka ugu jirtay qaadashada kaadhka codbixinta iyo kuwii soo qaatay, waxa ay dadkaasi u sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in ay soo qaateen ama soo qaadanayaan kaadhkooda codbixinta. Sidoo kale waxay dhamaan ku amaaneen KDQ iyo shaqaalaha KDQ sida ay hawshooda u wadaan iyo dulqaadka ay u leeyihiin bulshadeena iyo da’daalkooda sidii ay qof kasta oo is diiwaan galiyay u gaadhsiin lahaayeen kaadhkiisa cod bixineed.
Gabagabadii waxa ay xubnaha KDQ ku booriyeen bulshda in ay qaataan kaadhkooda, dhooraana hanaanka wanaagsan ee ay ugu jiraan safafka iyo in ay dulqaad iyo samir u yeeshaan qaadashada kaadhkooda.